LEGO Pirates 6285 Black Seas Barracuda သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်သနည်း classic
06 / 04 / 2020 07 / 04 / 2020 ဂရေဟမ် 6094 Views စာ0မှတ်ချက် 2020, 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 6285 က Black Seas Barracuda, ဗိုလ်ကြီး Redbeard, Ideas, Lego, Lego Ideas, Lego ပင်လယ်ဓားပြများ, ပင်လယ်ဓားပြများ
နှင့် Lego Ideas 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ ပရိတ်သတ်တွေကိုလွမ်းဆွတ်မှု၏ကြီးမားသောဆေးထိုးပေးခြင်း, Brick Fanatics အယ်ဒီတာဂရေဟမ်ဟန်းကော့ခ်ျက ၆၂၈၅ ကဘာကြောင့်ပင်လယ်နက် Barracuda သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုရှင်းပြသည် classic Lego အစုံ
ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ် Lego ပင်လယ်ဓားပြများ 6285 က Black Seas Barracuda ။ အတော်များများ Lego အစုံသည်ကလေးဘဝကိုသတိရစေသည့်လူကြီးများအတွက်လွမ်းဆွတ်မှုခံစားမှုများကိုကိုင်ထားသည်၊ သို့သော်ဤစarticular အစုံထက်နည်းနည်းပိုထူးခြားသည်။ ၎င်းသည်လူတို့၌ရှိသောအမှတ်တရများနှင့်အညီနေထိုင်ပြီးဖြစ်ပျက်သမျှကိုဖုံးအုပ်ထားသည် Lego ပင်လယ်ဓားပြများသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များကအဓိကအကျဆုံးဖြစ်သည်။
ဒီ set ကိုဘယ်လောက်ချစ်ရာသခင်နှင့်ပတ်သက်။ သက်သေပြလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ၏လွှတ်ပေးရန် Lego Ideas 1322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ ဒါကပဲ။ ၏တစ် ဦး ကခေတ်သစ် update ကို classic သင်္ဘောပျက်ကျွန်းအဖြစ်လည်းပြသနိုင်သည့်အရာသည် ၆၂၈၅ နှင့်ပတ်သက်သောအံ့သြဖွယ်ရာအရာအားလုံးကိုကိုးကွယ်သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ Lego ပင်လယ်ဓားပြတွေဟာစင်ပေါ်မှာရောက်လာပြီးပင်လယ်ဓားပြတွေကိုခေါ်လာကြတယ် Lego ကမ်းခြေ။ ပထမနှစ်တွင် cutlass ကိုင်ဆောင်ထားသည့်မျက်လုံးပြူးများတပ်ထားသောရတနာရှာသူများနှင့်သူတို့၏ရန်သူများ၊ bluecoat စစ်သားများပါ ၀ င်သည့်စုံတွဲအချို့ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုအစုံများစွာသည်သပ်ရပ်စွာနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြန်အလှန်အားဖြည့်ထားသော်လည်း၎င်းသည်ပစ်လွှတ်မှုကိုအနက်ဖွင့်သည့်အနက် ၆၂၈၅ Black Seas Barracuda ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းမှာသိသာထင်ရှားပါသည်။ ပင်လယ်ဓားပြများသည်ပင်လယ်ဓားပြများအားပင်လယ်ဓားပြများစီးနင်းလာစဉ်ပင်လယ်ဓားပြများဖြစ်သည်။ ကျွန်းများသည်ကြီးကျယ်သည်။ သေးငယ်သောသင်္ဘောများသည်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကြီးမားသောအထင်ကြီးလောက်ဖွယ်သင်္ဘောသည်ပင်လယ်ဓားပြများအကြောင်းဖြစ်သည်။
အသေးအဖွဲများနှင့်တွေ့ဆုံပါ - ပထမဦးစွာထင်မြင်ချက်များ
တကျိပ် classic Pirates ကိုးကားချက်များ - ငါးအကြီးဆုံး LEGO Ideas အစုံ
ကစားစရာအနေဖြင့် ၆၂၈၅ The Dark Shark - ဗြိတိန်တွင်နာမည်ပေးထားသည်နှင့်တူသည်။ ဒါဟာရှည်လျားသောတည်ဆောက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်, ကုန်းပတ်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ကပြသသောများစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်သည်းခံခြင်းအများကြီးလိုအပ်သည်။ ကြိုးမျှင်ကိုရွက်လွှင့်ပြီးဂရုတစိုက်ကြိုးပမ်းခဲ့ရသည်။ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်္ဘောသည်အသေးစားဓာတ်ပုံများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နေရာယူထားပြီးနေရာများစွာကိုနေရာ ချ၍ ၎င်းတို့ကိုလှည့်ပတ်နိုင်သည်။
အရာအားလုံးကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့ရသည် - အမြောက်များကအောက်ပိုင်းကုန်းပတ်မှထွက်လာသည်၊ အသေးစားဓာတ်ပုံများသည်တူးဖော်ခြင်းကိုတက်နိုင်ပြီးမျောက်သည်ကြိုးမှကြိုးဆွဲချနိုင်သည်။ ကစားနိုင်သည့်အလားအလာသည်ပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောတစ်စင်း၏မူလပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အသေးစိတ်စဉ်းစားထားသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ပြည့်နှက်လာသောအခါကလေးများအားနာရီများစွာဖမ်းဆီးနိုင်သည်။ နှင့်နာရီ။ နှင့်နာရီ။
ဤသင်္ဘောနှင့်ကစားခြင်းအတွက်အချိန်ကုန်မှုများစွာသည်လူအများက၎င်းကိုအလွန်ချစ်ခင်စွာမှတ်မိရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ပုံသဏ္alsoာန်သည်လည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသည်။ ကစားစရာအရောင်းဆိုင်များနှင့်ကလေးများအတွက်အိပ်ခန်းများကဲ့သို့သောအဓိကပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုအနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရွက်လွှင့်မှုများသည်အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်လာသည် Lego ပင်လယ်ဓားပြများ။ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံးအုတ်တံတိုင်းမထိဖူးသူများပင်ထိုစက်ရုံကိုမှတ်မိကြလိမ့်မည်။
6286 Skull's Eye Schooner သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပင်လယ်ဓားပြသင်္ဘောတစ်စင်းဖြစ်ပြီးအချို့ဒေသများရှိ ၆၂၈၅ ထက်သာလွန်သော်လည်း 6285 မူရင်းဖြစ်သောကြောင့်ဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်အတူပေါ်ထွက်လာသောကြောင့် Lego ရေလွှမ်းမိုးခံရလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ထိုက်သင့်သော icon တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အနည်းငယ်ထဲကတစ်ခု Lego စကားလုံးထိုက်သောအစုံ classic.
၎င်းသည်မေတ္တာဖြင့်အသစ်ပြုပြင်ထားသောမူရင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောသေတမ်းစာဖြစ်သည် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြကြောင်း၏ဒီဇိုင်းကိုသစ္စာရှိသော classic ခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများတည်ဆောက်ရန်တက်ဆောင်ခဲ့စဉ်မော်ဒယ်။ စင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီး ၀ မ်းသာစရာကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုရရှိစေပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပေမယ့်အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရွက်လွှင့်သည့်သင်္ဘောများဟာအလွန်ထူးခြားပါတယ်။
Lego Ideas 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ ယခုမှာရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com.
← LEGO Technic Fast & Furious 42111 Dom ၏ Dodge Charger သည်စောစီးစွာထွက်လာသည်
ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: အိမ်တွင်တည်းခိုခြင်း →